Lapho Ngibuka Okuncane, Izinto Ezingcono Ziyanda! | Martech Zone
Lapho Ngibuka Okuncane, Izinto Ezingcono Ziyanda!
NgoLwesibili, Agasti 14, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi ngiyazibuza ukuthi ngabe imigomo yesikhathi eside empeleni iyasiphazamisa yini emsebenzini osusondele. Uma uhlala ulangazelela okwengeziwe, ingabe uhlala ujabule lapho ukhona? Ngezinye izikhathi kudinga okuthile okuyinhlekelele ekhaya noma emsebenzini ukuze sikwazi ukuthola konke okufanele sibonge ngakho.
Kuleli sonto eledlule, ibhulogi yami ibuyile ekulungiseni. Ngiqale umsebenzi omusha futhi bengisebenza ubusuku ekwakheni olunye uhlelo lokusebenza - futhi bobabili bathatha ukugxila okuningi. Angiyena ujuggler omuhle - ngithanda ukugxila emgomweni futhi ngisebenzele ukuwufinyelela. Ngenxa yalokhu, ukugxila kwami ​​emsebenzini wami omusha njengamanje kushubile. Lapho nje ngishiya umsebenzi futhi ngigxuma emotweni yami, ukunaka kwami ​​kuphendukela kuphrojekthi eseceleni. Ekushayeleni kwasekuseni, kubuyelwe ekucabangeni ngomsebenzi wami.
Ukulahleka emasontweni ambalwa edlule bekuyi-blog yami. Ngiqhubekile nokuthumela ukufundwa kwami ​​kwansuku zonke kepha ngangiba mancane kakhulu ngokuthunyelwe kwami ​​kubhulogi. Angikholwa ukuthi zenziwe ngokushesha - kepha angizange ngigxile kakhulu njengoba bekufanele ngibe nakho. Mhlawumbe indawo engangikunake kakhulu kwakuqapha eyami Imali engenayo ye-Ad, Ama-Analytics Namazinga. Ngangazi ukuthi nginomsebenzi okufanele ngiwenze futhi angikwazi ukukhathazeka ngokulahleka, ngakho-ke nginqume ukungakunaki.
Umkhuba wokuqapha izinga lami nomgwaqo wami wawusuqala ukuba yinto engathandeki! Angikholwa ukuthi ngizoyibheka ngaphezu kwesisodwa ngosuku, kepha lapho ngibuka izinombolo zisala, bengizibheka amahora amaningi bese ngizama ukulwa nayo. Kufana nokucindezela emuva igagasi - ukufundwa cishe umfutho, hhayi ukusabela. Lokho kusho ukuthi imarathon hhayi ijubane… futhi ngidinga ukuzikhumbuza lokho kaningi.
Ngakho-ke - uma izibalo zakho zingahambi ngendlela oyifunayo, mhlawumbe udinga ukuthatha ikhefu kwikhampasi. Ngingasho ngobuqotho ukuthi ngiyaqhubeka kahle manje ... ukufunda kwami ​​sekukhulile, izibalo zami zokuphakelayo seziphezulu… nemali engenayo iphezulu. Ngidinga ukwenza engikwenza kahle kakhulu futhi lokho ngikukhiphela isikhathi eside futhi ngiyeke ukubuka izinombolo. Ngizobuyela emuva Ukunikezwa Ibhulogi lapho nje iphrojekthi yami isiqediwe! Ngibonga bonke labo bafundi abalinde ngokubekezela.
Lapho ngibuka okuncane, izinto ziba ngcono!
Tags: ukuhlaziywaukuhlaziywa ukukhubazekaAma-Analytics
Umncintiswano weMillion Dollar Wiki ovela kuJohn Chow dot Com
Fav.or.it Ukuqalisa Ukubuka kuqala
Aug 15, 2007 ku-1: 37 AM
Indaba emnandi 🙂 ngingasho ukuthi kunjalo kimi manje, ngibheka izibalo zeziteshi zami ze-Adsense kaningi ngangokunokwenzeka, ngoba kuyisizini kimi. Kepha lokhu kukhokhile, ngakho-ke kungekudala ngizokwehlisa ijubane 🙂
Aug 15, 2007 ku-2: 29 AM
Ngiyavuma. Kungaba lula kakhulu ukukhathazeka ngezibalo. Ngisabheka izibalo zami kanye ngosuku engicabanga ukuthi ziningi kakhulu.
Vele ugxile ekubhaleni okuqukethwe okuhle nokumaketha ibhulogi yakho futhi ithrafikhi izolokhu iza 🙂
Aug 15, 2007 ku-8: 12 AM
Ngiyakwazi ukulandisa ngokuphelele! Futhi ikakhulukazi njengoba ibhulogi yenkampani yami yathuthwa futhi yaqala kabusha kusukela ekuqaleni, akuhlekisi ukuthi singakanani isikhathi engisichitha ngokweqile ngaphezu kwezibalo zethu ezikude kangaka, ezibuhlungu kakhulu. yenza kangcono kakhulu!
Ngikufisela inhlanhla, ngiyaqiniseka ukuthi uma ungena ekushintsheni kwezinto uzokwenza isikhathi esithe xaxa sokuthumela!
I-Henri @ B2B Sales Blog
Aug 21, 2007 ku-8: 33 AM
Nami ngiyakwazi ukuqondana nalokhu okungenhla. Ngicabanga ukuthi futhi kuyingxenye ebalulekile yokuphila njenge-blogger (nomuntu othengisayo / wokuthengisa). Ngezikhathi ezithile ngiphinde ngizithole ngihlola izibalo zesiza sami kaningi kakhulu. Kufanele ngizikhahlele ngemuva bese ngigxila ekuthuthukiseni okuqukethwe koqobo.
Njengomuntu oqeqeshiwe wokuthengisa ngiyakwazi lokhu: Ukuthambekela kokuchitha isikhathi ekubikezeleni, amaspredishithi, njll esikhundleni sokuhlala phambi kwamakhasimende akho ukuvala amadili futhi ukhathazeke ngokuhlolwa kwekhomishini ngokuhamba kwesikhathi. Njenge-blogger ngidinga ukugxila ekutholeni ababhalisile bami ngokugxila kokuqukethwe okuhamba phambili. Futhi bonke abanye bazofika, njengoba besho 😉